ခုခေတ် ၁၅ ၁၆ ဝန်းကျင် မိန်းကလေး တချို့ ရိုင်းတာ ကို ဂေါ်တယ်ထင်နေကြတ ယ် အပြောအဆိုေ တွ က ထဘီထဲကမထွက်ဘူး.. – Myanmar
ခုခေတ် ၁၅ ၁၆ ဝန်းကျင် မိန်းကလေး တချို့ ရိုင်းတာ ကို ဂေါ်တယ်ထင်နေကြတ ယ် အပြောအဆိုေ တွ က ထဘီထဲကမထွက်ဘူး..
October 28, 2020 admin Knowledge, Life Style 0
ကိုယ့်နှူ တ်ထွက်စကား ညစ်ညမ်းမှအထာကျတယ်ထင်နေကြတယ်…..ကိုယ့်ကိုယ်ကို တောင် တန်ဖိုးမထားတာ ဘယ်ယောကျာၤးကမှလဲ ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်ဘူး… !အနား အားပေးတဲ့သူ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်…ဝိုင်းပီး ပင့်ပေးနေတဲ့သူရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်..ကိုယ်ပေါင်းတဲ့တခြားသူတွေကလဲ အဲ့လို အသုံးအနှုန်းလောက် ကိုအရမ်းဂေါ်တယ်လို့ တလွဲတွေးနေတဲ့သူတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်…
ဒီလို အောက်လူံးတွေ ပြောနေတဲ့ မိန်းကလေးက အလွယ်ရမယ်ဆိုတာ ယောကျာၤးတိုင်း သိတယ်..ဘာရရ စားမယ် ဆိုတဲ့ကောင်တွေလောက်ဘဲ ရလိမ့်မယ်ဒါကို ဆရာကျတယ် ထင်ရင် ညေးတို့ မှားလိမ့်မယ်သုတ်ကြောင်တွေကလွဲရင် နှူတ်ရိုင်းတဲ့မိန်းကလေး ဘယ်သူမှ အထင်မကြီးပါ ..ဆရာ ကျတယ်လား sry ပါ သနားစရာကလေးတွေလို့ဘဲ မြင်တယ်
ရုပ်ကလေးတွေနဲ့မှမလိုက် ပေါက်ကရ အသူံးအနှူန်းတွေနဲ့ ကိုယ့်သိက္ခာကို ချနင်းနေတာ မမြင်ကြဘူး…အထာကျတယ်လား sry ပါ … လမ်းဘေးမှာ ပန်းရောင်းတဲ့ကလေးတောင် ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာ နားလည်တယ်!ကိုယ့်တန်းဖိုးကိုယ်သိပါ..လမ်းဘေးအဆင့်တောင် မရှိဘူးဆိုတာ ! တအားတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စွပ်အထင်ကြီးနေတယ် ..ကိုယ့်အဖေကိုယ့်အမေ သိက္ခာ ပြန်စဉ်းစားတတ်ရင် ဒီကလေးဟာFacebook မှာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ဂေါ်လီလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး!အဖြေက ရှင်းရှင်းလေး … ???
တန်ဖိုးဆိုတာ ရှင်းပြလဲနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးဆိုတာ မသိရင်သိမ်မွေ့တဲ့ မိန်းကလေးတယောက်ကိုကြည့်ပါသူ့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကိုကြည့်ပါသူ့ ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကောင်လေးရဲ့ဆက်ဆံပုံကိုကြည့်ပါသူ့အပြောအဆို သူ့နေထိုင်ပုံ ကိုယ်နဲ့ယှဉ်ကြည့်ပါမင်းကိုယ်မင်း သိမ်ငယ်လာလိမ့်မယ် babe 🙂အတုယူမှားရင် ပြင်ပါ😘ကိုယ်ထက်ရင့်ကျက်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပါ😉အရိုင်းအစိုင်းတောထဲကနေ အပြင် အလင်းကိုထွက်ကြည့်ပါ 💫ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ် နားလည်တတ်ပါစေ… 😇နောင်တဆိုတာ နောက်ကျသွားရင် ဒီစော်ကလွယ်လွယ်လေးဘာ ဆိုတဲ့စကား တသက်လုံး မင်းနံမည် နောက်တွဲလူံးဖစ်သွားလိမ့်မယ် 😒မုန်းလဲမတတ်နိူင်ဘူးကွယ်.. ပြင်စေချင်တာအမှန်ဘဲ 🙂